Barcelona Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah La Gaadhay Xidiga Khadka Dhexe Ee Ivan Rakitic
SLNTV: Barcelona Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah La Gaadhay Xidiga Khadka Dhexe Ee Ivan Rakitic Iyo Rakitic Oo Heshiiskiisa Cusub Barri Saxaafada Loo Soo Bandhigi Doono.
Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in xidiga kooxdeeda ee Ivan Rakitic ay la gaadhay heshiis cusub oo waqti dheer Camp Nou ku sii hayn doona. Ku dhawaaqista heshiiska cusub ee Barcelona ayaa ku soo beegantah 24 saacadoo waqti ka yar markii ay aduunka kaga yaabsatay soo laabashadii taariikhiga ahayd ee kulankii PSG.
Ivan Rikitic ayaa mustaqbalkiisa u hibeeyay kooxdiisa Barcelona wuxuuna meesha ka saaray wararkii xanta suuqa ee la xidhiidhinayaya kooxaha Premier Leaque-ga iyo Serie A. Barcelona ayaa sidoo kale war saxaafadeed ay soo saartay ku shaacisay lacagta lagu burburin karo heshiiska cusub ee Ivan Rakitic uu Camp Nou ku sii joogi doono.
Warka ay Barcelona ku shaacisay heshiiska cusub ee Ivan Rakitic ayaa lagu yidhi: ” Kooxda kubbada cagta Barcelona waxay ku dhawaaqday in ay heshiis la gaadhay Ivan Rakitic si uu qandaraaskiisa ugu kordhiyo ilaa June 30,2021. Waxaana heshiiskiisa lagu burburin karaa 125 milyan oo euros. Wuxuuna qalinka ku duugi doonaa March 10 marka ay saacadu tahay 1:00 CET isaga ku saxiixi doona xafiisyada kooxda”
Ivan Rakitic ayay barri oo khamiis ah Barcelona saxaafada u soo bandhigi doontaa heshiiskiisa cusub isaga oo doortay in uu afar sanadood oo dheeraad ah sii joogo Camp Nou. Xidiga ree Croatia ayaa haddii ay kooxi doonayso in ay Barcelona kala wareegto waxay ku qasban tahay in ay bixiso 125 milyan oo euros taas oo ah lacagta lagu burburin karo heshiiska uu barri oo khamiis ah qalinka sida rasmiga ah ugu duugi doono.
Rakitic ayaa Barcelona ku soo biiray xagaagii 2014 kii isaga oo ahaa 26 sano jir ah wuxuuna magiciisa ku qoray taariikhda Barcelona kadib markii uu door wayn ku lahaa in kooxda Luis Enrique ay saddexda koob ku guulaysato xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay. Rakitic ayaa Barcelona u saftay 145 kulan oo uu ugu danbeeyay kulankii PSG ee Champions Leauque-gu, wuxuuna soo dhaliyay 23 gool oo uu ka mid yahay goolkii finalkii Champions Leaque-ga ee ay Barcelona koobka ka qaaday Juventus.